Ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fankatoavana Azy – filazantsaramada
Ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fankatoavana Azy
Publié parfilazantsaramada	 mars 15, 2013 mai 31, 2013 Laisser un commentaire sur Ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fankatoavana Azy
« Fa tsy hisy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. » Lioka 1:37
Nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela hiteny amin’i Maria fa hitoe-jaza
izy, ka hiteraka zaza-lahy ary ny anarany hatao hoe Jesosy, Zanaky ny Avo
indrindra, ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. Ny ambaran’ny anjely tamin’ity virjiny ity dia ny hoe: efa nahita fitia tamin’Andriamanitra izy. Ny
mety ho dikan’izany teny izany dia ny hoe efa tia azy Andriamanitra.
Inona no anton’ny iraka nampanaovina ity anjely ity?
Ny hilaza amin’i Maria fa hitoe-jaza avy amin’ny Fanahy Masina izy. Zava-mahagaga tokoa izany. Nefa dia nino ity vehivavy ity! Tany ampiandohana dia natahotra ihany izy. Fa izao dia nino izay nolazaina taminy izy.
Nanambara ity anjely fa Elizabeta , na dia antitra aza ka efa atao hoe momba dia tanteraka taminy izay nolazaina taminy: tsy misy tsy ho tanteraka
ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. Raha ny maha olombelona dia sarotra
ny hino hoe virjiny hiteraka, nefa dia izany no nasaina nambaran’ity anjely
ity tamin’i Maria.
Ny fihetsika nasetrin’i Maria izany na dia nisy fanahiana kely aza teo amboalohany dia ny fanekena nataony: Inty ny ankizivavain’ny Tompo. Fanoloran-tena.
Inty ny ankizivavin’ny Tompo. Mitory fanekem-pinoana sahady eo amin’ny zava-baovao hihatra aminy sahady izy. Zavatra tsy mbola hita, zavatra mbola tsy hay sy tsy mahazatra nefa dia nekeny sahady, izany no atao hoe finoana an’Andriamanitra. Toa mampahatsiahy ny amin’ny Teny nataon’Andriamanitra tamin’i Abrahama: Mandehana miala amin’ny taninao sy ny havanao ary tranon’ny rainao hankany amin’ny tany izay hasehoko anao; dia hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho tonga fitahiana tokoa hianao; ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Ny fanekena ny Teny avy amin’Andriamanitra dia tena mariky ny finoana. Tany mbola tsy fantatra ary toerana mbola tsy fantatra, fa ny tany efa nahazatra sy ny fomba efa nahazatra dia nasaina nilaozana. Fa toerana mbola tsy fantatra mihitsy no asaina aleha io, zavatra tsy mbola natao mihitsy no asaina atao.
Ny tsara ho marihina anefa dia tsy maintsy fotorana izay mibaiko amin’izany: raha i Satana no miteny dia tokony handà isika, ny eto dia Andriamanitra no mampiteny. Rehefa Andriamanitra no miteny dia voalaza eto fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. Soratra Masina ihany no manazava ny Soratra Masina. Raha manaiky ny Teny izay omen’Andriamanitra antsika isika dia ho tonga sy ho tanteraka amintsika tokoa izany Teny izany.
Ny marina dia mbola omen’Andriamanitra safidy isika ka mbola afaka mandà ihany. Nefa raha manaiky isika , dia ho tanteraka amintsika ny teny nampilazaina. Zava-dehibe ny fanekena ny Tenin’Andriamanitra: hahatonga anao ho firenena lehibe Aho ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra, izany no vokatry ny faneken’i Abrahama ny Tenin’Andriamanitra. Imanoela, na Jesosy Kristy izay tonga fitahiana ho an’izao tontolo izao, ny Anarany no hahazoana famelankeloka, izay no vokatry ny faneken’i Maria ny Tenin’Andriamanitra.
Ny vokatry ny tsy fanekena dia fatiantoka, ary mety hitarika ho amin’ny
zavatra ratsy, mety hanimba izay mandà. Ny tsy finoana dia mahatonga
fahatezeran’Andriamanitra, ary voalaza fa tsy misy ahazoantsika sitraka amin’Andriamanitra raha tsy amin’ny finoana.
Nisy ny fotoana nety nandavantsika ny Tenin’andriamanitra, nanamafisan-tsika ny fontsika tamin’ny antsony; miverena Aminy dia ny mbola azo atao, rehefa mbola misy fofon’aina ianao dia mbola mariky ny famindrampony izany, miverena Aminy fa izay rehetra manatona Azy tsy mba ho laviny mihitsy!
Mety mihevitra ny tenanao ho efa lasa lavitra Azy hianao, ary toa efa ratsy
tsy azony raisina intsony ary tsy manankery hiverina Aminy intsony: ho anao
mihitsy no miantefa ny Teniny, fa raha miverina Aminy hianao dia mbola vonona handray anao Izy. Ny tsy manan-kery indrindra no antsoiny: Mankanesa aty Amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho hanome azy fitsaharana! Hanavao anao indray Izy, ary hanome hery anao ho tonga olona vaovao indray!
Tél.: 22 210 42 – 034 20 635 53 – 032 54 635 53 – 033 15 635 53
Siteweb : www.feonyfilazantsara.org
Publié parfilazantsaramada mars 15, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorized
Ny namahanan’ny Tompo olona dimy arivo
Ilay Mpanjaka malemy fanahy sady mitaingina boriky